ပိုက်စီးရီးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Rongqi
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖိုင်ဘာပလပ်စတစ် Composites > ပိုက်စီးရီး
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် Fiber Plastic Composites ၏ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်စီးရီးများကိုအိမ်တွင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအသုံးချမှုများတွင်ကြမ်းခင်းများ၊ နံရံများ၊ ခြံစည်းရိုးများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အိမ်များ၊
ပုံစံ:FPC86T3 -3.2mm * 3.2mm-800G / M
FPC86T3 -3.2mm * 3.2mm-800G / M
၁။ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် - FPC86T3 ပိုက်စီးရီး
မှတ်ချက်။ အကယ်၍ ဤထုတ်ကုန်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နှင့် coronavirus (COVID-19) သည်သင်၏အမိန့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါကသတိပြုရန်နှင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့် ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။
သစ်သားကြမ်းပြင်၏ဖိုင်ဘာပလပ်စတစ် Composites ။
တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သူ၊ အင်ဂျင်နီယာသုတ်ဆေးကြမ်းခင်းခင်း။ ငါတို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ၁၀၀% PVC အခမဲ့ဖြစ်သည်။
PS:The color can be customized, and the အရှည် can be delivered according to the specified အရှည်,Size hasapositive and negative deviation of 2MM, g weight hasapositive and negative deviation of 50G/M, they are normal.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်သစ်သား - ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ထားသောပစ္စည်းများအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ FPC များကိုအိမ်တွင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအသုံးချမှုများတွင်ကြမ်းခင်း၊ နံရံများ၊ ခြံစည်းရိုးများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အိမ်များ၊
စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ၏ 4.Product အရည်အချင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကိုအ ၀ တ်အထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်ဟုမထင်ပါနှင့်။
၁။ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ပါ။ သစ်သားအပင်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သစ်သားအမှုန့်များကိုအစားထိုးရန်ရှိပြီးသားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအပြည့်အဝအစာကြေပြီးအသုံးပြုရန်။
၂။ ရာသီဥတုကောင်းမွန်ခြင်း။ သစ်သားပလပ်စတစ်၏ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်မှုအားအသုံးချခြင်းတွင်နာကျင်မှုဖြစ်စေသည်
၃ ။ WPC သည်ကျိုးပဲ့လွယ်ပြီးချိုးဖဲ့ရန်လွယ်ကူသည်၊ FPC ဖွဲ့စည်းမှုသည်ခိုင်မာမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပြီးချိုးဖျက်ရန်မလွယ်ကူပေ။
4. elastic နှင့်အဆင်ပြေလမ်းလျှောက်။ သစ်သားပလတ်စတစ်သည်လမ်းလျှောက်ရန်ခဲယဉ်းပြီးအဆင်မပြေသော်လည်းဖိုင်ဘာပလပ်စတစ်ဖွဲ့စည်းမှုသည်လမ်းသွားလမ်းလာများ၏ခြေဆစ်နှင့်ဒူးကိုကာကွယ်ပေးသည်။
၅။ ကောင်းမွန်သောအသံစုပ်ယူနိုင်မှု၊ ဤအင်္ဂါရပ်သည်ဘုတ်အဖွဲ့အခန်း၊ အခန်းကန့်၊ ကြမ်းခင်းနှင့်အခြားအပလီကေးရှင်းများတွင်တိုးတက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
၆ ။ လက်သည်းကိုက်ခြင်း။ အမှန်တကယ်စမ်းသပ်မှုမှတဆင့်ဖိုင်ဘာပလပ်စတစ်ဖွဲ့စည်းမှု၏လက်သည်းကိုအားဖြည့်သစ်သားပလပ်စတစ်ထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။
၇ ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အခါအားလျော်စွာကွဲအက်ခြင်းနှင့်အစွန်းပြိုကျခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ပိုကောင်းသောဆန့်ကျင်ရိုက်နှက်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူဖိုင်ဘာ - ပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းသည်အတော်လေးဆိုးသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်နေရာနှင့်အခြားချိတ်ဆက်မှုကိုခံနိုင်သည်။
8. အပူတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အအေးကျုံ့, ပုံပျက်သောရန်မလွယ်ကူ။
၉ ။ သစ်သားပလတ်စတစ်ထက်ဖိုင်ဘာပလပ်စတစ် ၁၅% ကျော်အလင်းရောင်။ တစ်ဖက်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကုန်ကြမ်းများကိုပိုမိုသိမ်းဆည်းသည်။
ကုန်ကြမ်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်အခြားရှုထောင့်များ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောဖိုင်ဘာပလတ်စတစ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများစွာသည်ကောင်းမွန်သောအချက်များရှိသည်။ ရိုးရာသစ်သားပလပ်စတစ် HDPE နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွမ်းဆောင်ရည်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရာပစ္စည်းများအစားထိုးအရှိန်မြှင့်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုပေးပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကောင်းနှင့်ပို့ဆောင်သည့်နေ့ကိုကောင်းမွန်စွာပေးမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ webiste www.RQ-CHINAFACTORY.com သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်
သင်၏မေးမြန်းချက်ကို ၂ နာရီအတွင်းဖြေကြားပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် PVC များမပါ ၀ င်ပါ။ အဓိကအားဖြင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်သော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်က ပို၍ ကောင်းပါသည်၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များအသေးစိတ်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားစျေးနှုန်းအပါအဝင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
၂။ မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။
ယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်ဆုံးအမှာမှာ ၂၅ T ဖြစ်သည်
ပုံမှန်ပေးပို့ချိန်သည် ၁၅ ရက်ဖြစ်သည်
WPC အတုကိုတာဝန်ခံသူ ၅၀ ရှိသည်
တစ်လလျှင်တန် ၅၀၀ ထုတ်လုပ်သည်
hot Tags:: ပိုက်စီးရီး, ပေးသွင်းသူ, တရုတ်, လျှော့စျေး, အရည်အသွေး, ဖန်စီ
Beam Keel စီးရီး
ကြမ်းပြင်ဒါမှမဟုတ် Tray ပြား
ကြမ်းပြင် Keel စီးရီး
ဖိုင်ဘာပလပ်စတစ်ဖောက်ထား Laminate ကြမ်းပြင်
ဖောက်ထား Laminate ကြမ်းပြင်
FPCs ၏မဏ္Keိုင် Keel